Tokony hampody ny fianakavian’ireo olona nampiasain’ny ISIS ve i Trinite sy Tobago? · Global Voices teny Malagasy
Hanao fanamarinana araka ny mahazatra ny governemanta vao manapa-kevitra
Voadika ny 09 Aogositra 2019 5:18 GMT
Namoy ny faritra maro tao Iràka sy Syria tamin'ny alalan'ny fifehezana maherisetra, mamoritra ary feno habibiana ny ISIS, teraka avy amin'ny Al Qaeda tamin'ny janoary 2019. Nanomboka teo, tsy manan-tanindrazana intsony ny maro amin'ireo fianakavian‘ny vahiny mpitolona mitam-piadian'ny ISIS.
Manodidina ny 130 eo ho eo ny olompirenena avy amin'ity firenena karibeana ao Trinite sy Tobago ity no nanatevin-daharana ny ISIS ampitan-dranomasina — ny taha avo indrindra isan'olona (raha mitaha amin'ny isan'ny mponina ao aminy) voaangon'ilay vondrona mitam-piadiana any amin'ny ilabolantany andrefana, manondrotra an'i Trinite sy Tobago hanao adihevitra amin'ny fampodiana an-tanindrazana ireo niankindoha tamin'ireo niditra ho ISIS.
Nihena ny firohotan'ireo mpiady avy amin'ity firenena kelin'i Karaiba ity rehefa nilaza ny fandreseny manoloana ny ISIS ny tafika amerikana sy ny tafika syriana. Maro tamin'ireo mpitolona mitam-piadina, indrindra fa ny lehilahy, no voasambotra na maty voatifitra, ka namela vady sy zanaka maro. Mitady fialofana sy sakafo any amin'ireo tobim-pamonjana any Syria, indrindra fa any amin'ny tobin'ny mpialokaloka al-Hol any avaratra atsinanan'i Syria amin'izao fotoana izao ireo fianakaviana nilaozana ireo.
Rehefa nivory ny parlemantan'i Trinite sy Tobago tamin'ny 2 jolay 2019, nanontany ny Senatera Wade Mark raha efa nikasa ny hanamora ny fampodiana ny fianakavian'ireo nanatevin-daharana ny ISIS ny governemanta na tsia. Namaly ny Minisitra Stuart Young misahana ny fiarovam-pirenena fa tsy mbola nahazo fanamafisana izy na misy na tsia avy ao Trinite sy Tobago any an-toby.
Ny vondrona Con­cerned Mus­lims of Trinidad & Tobago (CMTT), izay mitazona fa farafahakeliny 40 ny ankizy ary 16 ny vehivavy ao amin'ny toby al-Hol no manana rohy amin'i Trinite sy Tobago, ka niangaviany ny governemanta mba hanampy ny fampodiana ireo mpiray tanindrazana ireo. Na izany aza, nataon'ny minisitra Young mazava tsara fa tsy maintsy manaraka ny arofenitry ny fiarovana ny firenena mialoha ny hanapahan-kevitra amin'ny fampodiana azy ireo:
Tsy afa-miteny izay halavan'ny fotoana hanatanterahana ny arofenitra i Young, saingy nanandratra ny tahony momba ireo vehivavy sy ankizy ny sasany avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina miozolomana ao an-toerana, izay lazaina fa tsy miaina araka ny maha-olombelona ao an-toby. Mamairparitra ny toe-draharaha ho krizin'ny mahaolombelona, nivoaka tamin'ny fahitalavitra ilay imam Trinidadiana Sher­az Ali hilaza fa maro tamin'ireo vehivavy sy ankizy ireo no nandeha nankany Syria tsy araka ny sitrapony.
Tamin'ny tatitra iray nivoaka tamin'ny marsa 2019, nilaza ny The New York Times fa mitazona olona 72.000 isa ny toby. Fanadihadiana vao haingana kokoanataon'ny France 24 no nilaza fa niakatra ho 100.000 olona izany isa izany any amin'ireo toby sy ny faritra manodidina azy. Ahitana olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ireo monina ao an-tobin'i al-Hol, ary tsy manaiky hody an-tanindrazana ny sasany amin'izy ireo nefa misy ireo te-hody mafy mihitsy.
Vitsy tena vitsy ny tatitra ofisialy manondro misy ankizy sy vehivavy Trinidadiana ao an-toby — fa tsy fantatra kosa ny isa marina. Tany amin'ny fiandohan'ny taona 2019, anefa, nisy reny Trinidadiana iray tafahaona ihany tamin'ny zananilahy roa rehefa naka ankeriny azy ny rain-dry zalahy ireo ka nitondra azy ireo tany Syria. Namita iraka fanavotana i Clive Stafford Smith mpisolovavan'ny zon'olombelona ary nitsikera ny governemantan'i Trinite sy Tobago izy taty aoriana noho ny tsy fisian'ny fanohanana avy amin-dry zareo, na dia nisy aza ny famoahana an-gazety avy amin'ny minisitry ny fiarovam-pirenena nilazany ny fandraisany anjara tamin'ny iraka fanavotana. Miantso ny famoahana an-gazety ho “fandambolamboam-panompana”, nilaza ny fifampiraharahana nataon'ny ekipa manokan'ny governemanta tamin'ireo mizaka ny zom-pirenena [tavela] any Syria ho “tsy misy nilàna azy mihitsy” i Stafford Smith fa tsy misy mihitsy ny fanampiana ilay reny tamin'ny fikarohany ireo zananilahy.
Raha maro ny olompirenena faly tamin'ny fiverenan'ireo tanoralahy ireo, mbola misalasala kosa ny sasany amin'ny fiverenan'ny hafa — indrindra fa ireo vehivavy lehibe — avy ao an-toby. Misy ireo firenen-kafa tahaka an'i Frantsa nanapa-kevitra ny hampody ny ankizy ihany; ny lehibe kosa tsy maintsy mandalo famotorana mialoha ny hanaovana fifampiresahana fampodiana: